बलिउडका तीन खानले कति पढेका छन् ? – Nepal Parikrama
मुम्बई/एजेन्सी– बलिउडमा नाम र दाम कमाउन सफल तीन खान अमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान दर्शकको रोजाईमा अग्रणी आउने तीन खान हुन् । उनको अभिनय नरुचाउने सायद कमै हौलान् र उनीहरुले अभिनय गरेका प्राय सबै चलचित्र सफल नै भएका छन् । लामो समयसम्म फिल्मी क्षेत्रमा राज गरेका यी तीन खानको भित्री पाटोका विषयमा भने सायदै कमैलाई थाहा होला । त्यो पाटो भनेको उनीहरुले कति पढेका छन् ?
बलिउडमा अभिनयमा प्रसिद्धि कमाएका यि खानले पक्कै पनि धेरै पढेको हुनु पर्छ भन्ने आम सर्वसाधरणको धारणा हुन सक्छ तर यि खानले कसैले पनि डिग्री पुरा गरेका छैनन् । तीन खान मध्ये सबै भन्दा धेरै पढ्ने खान शाहरुख छन् । शाहरुख दिल्ली युनिभर्सिटीको हंसराज कलेजका बिद्यार्थी हुन् । हंसराज कलेज पछि शाहरुख मास कम्युनिकेशनमा मास्टर्स डिग्रीको लागी दिल्लीको जामिया मिलियामा रहेको भर्ना भएका थिए । तर उनी उक्त कोर्ष पुरा नगरी बिचैमा छोडेर अभिनयमै सक्रिय रहेका छन् ।
यस्तै बडिउडका अर्का सफल खान हुन् सलमान । सलमानले ग्वालियरमा स्कुल लेभन सकाए त्यसपछि उच्च शिक्षको लागि मुम्बइको सेन्ट स्टेनिसलन्स हाई स्कुलमा भर्ना भए त्यहाबाट छोडेर उनी बान् ऽाको नेशनल कलेज भर्ना भए तर कोर्ष पुरा नगरी अभिनयमा लागे, उनको अध्ययन पनि यही रोकिएको छ ।
यसैगरी बलिउडका सफल नायक रुपमा चिनिने आमिर खानले सबै भन्दा कम पढेका छन् । तर आम दर्शकले उनको फिल्म हेरेर पक्कै पनि पत्याउादैनन् । किनकी उनले लामै स्टडी गरेर फिल्म बनाउने भएकाले पनि दर्शकको नपत्याउनु स्वभाविक हो । उनले जम्मा १२ कक्षा सम्म पढेका छन् । त्यस पछि उनी उच्च शिक्षाको लागी कलेजमा भर्ना भएनन् । अभिनयमा लागे र अभिनयबाट प्रसिद्धि कमाइरहेका छन् ।
Published On: २१ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार १९:२३